ဖူးနုသစ်: တရားထိုင်ခြင်းတွင် ကြောင်၏ အရေးပါပုံ
တရားထိုင်ခြင်းတွင် ကြောင်၏ အရေးပါပုံ
ပေါ်လိုကိုရယ်လ်ဟို(Paulo Coelho)ဟာ ရူးသွပ်ခြင်းအကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ “ဗာရိုနီကာ သေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခြင်း (Veronika Decide to Die)” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရေးနေတဲ့ အချိန်တုန်းက သူ့ဘာသာသူ အတင်းအကြပ် မေးခွန်းတွေ ထုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေထဲက ဘယ်နှစ်ခုဟာ တကယ် လိုအပ်တဲ့ အရာတွေလည်း ဘယ်နှစ်ခုကတော့ ရယ်စရာ ကောင်းတဲ့ အပြုအမူ တွေလည်း ဆိုတာကိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘာဖြစ်လို့ နက်တိုင်တွေ ဝတ်ကြတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ နာရီတွေဟာ လက်ယာရစ် လည်ရတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆယ်လီစိတ် ဂဏန်းတွေနဲ့ အမြဲထိတွေ့နေပေမယ့်လည်း ဘာလို့ တစ်ရက်မှာ မိနစ် ၆၀ စီရှိတဲ့နာရီ ၂၄ နာရီ ရှိနေရတာလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
တကယ်တမ်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့လိုက်နာနေတဲ့ လူမှုကျင့်ဝတ် အတော်များများမှာ အခြေအမြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ အဲဒီ ကျင့်ဝတ်တွေကို မလိုက်နာပဲ တစ်ခြားသောနည်းနဲ့ နေထိုင် ပြုမူမယ် ဆိုရင် အရူး ဒါမှမဟုတ် မရင့်ကျက်သူလို့ သမုတ်ခံရတတ်ပါတယ်။
ဒီအတိုင်း ဆက်သွားကြမယ် ဆိုရင်တော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ နောင်အချိန်တွေ ကြာလာတဲ့အခါမှာ ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်လာ စေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကို ချမှတ်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ဂျပန် ပုံပြင်ကလေး တစ်ပုဒ်က သူ့ရဲ့ အယူအဆကို ခြယ်မှုန်းပြ ထားပါတယ်။
မာယုကာဂီ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ ကျောင်းထိုင် ဇင်မာစတာကြီးမှာ သူ့ဘဝအတွက် အချစ်ရဆုံး ကြောင်တစ်ကောင် ရှိပါတယ်။ ကြောင်ကလေး သူ့နံဘေးမှာ ရှိနေရင် စိတ်ချမ်းသာတဲ့အတွက် သူ့နံဘေးမှာ အမြဲလိုလို ရှိနေအောင် တရားထိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေမှာ သူဟာ ကြောင်ကို နံဘေးမှာ ခေါ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။
တစ်မနက်မှာတော့ အလွန်အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ဇင်မာစတာကြီးဟာ သေဆုံးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကြီးဆုံးတပည့်က သူ့နေရာကို ဆက်ခံပါတယ်။
“ငါတို့ ကြောင်ကို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။” လို့ တစ်ခြား ဘုန်းကြီးတွေက ဝိုင်းပြီး မေးကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရင် ဆရာဟောင်းကို သတိရ အလေးအမြတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ မာစတာ အသစ်ဟာလည်း ကြောင်ကို သူ့ရဲ့ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ သင်တန်းတွေမှာ ဆက်လက် တက်ရောက် စေပါတယ်။
အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ အခြား ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဒေသအတွင်း လှည့်ပတ် သွားလာနေတဲ့ တပည့်ဘုန်းကြီးတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီဒေသမှာ ရှိတဲ့ အကျော်ကြားဆုံး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တရားထိုင်တိုင်း ကြောင်တစ်ကောင် အမြဲပါနေတယ်ဆိုတာကို တွေ့သွားကြ ပါတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီသတင်းစကားဟာ ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ အခါမှာတော့ ကြောင်ကလေးဟာ သေဆုံးသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်းက သင်တန်းသား ဘုန်းကြီးတွေက ကြောင်ကလေး တစ်ကောင် ရှိမနေရင် မနေတတ် တော့တဲ့ အတွက် နောက်ထပ် ကြောင်တစ်ကောင်ကို ထပ်မွေးကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အခြားဘုန်းကြီးကျောင်း တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ တရားထိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေမှာ ကြောင်တွေကို စတင်ခေါ်ဆောင် လာကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ မာယုကာဂီ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ ထင်ရှားကျော်စောမှုနဲ့ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ သင်ကြားမှုမှာ ကြောင်ဟာ တကယ်အရေးပါတဲ့ သတ္တဝါအနေနဲ့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ယခင်ကရှိခဲ့တဲ့ ဇင်မာစတာကြီးဟာ အသင်အပြ အလွန်ကောင်းတဲ့ ဆရာကောင်းတစ်ယောက် ဆိုတာကို မေ့လျော့လာပါတယ်။
မျိုးဆက်တွေ အဆင့်ဆင့် ကူးပြောင်းလာပြီးတဲ့ နောက်မှတော့ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေရဲ့ တရားထိုင်ခြင်းမှာ ကြောင်ရဲ့ အရေးပါပုံကို နည်းလမ်းတကျ ရှာဖွေသဘောတူပြီး စတင် ရေးသားထုတ်ဝေ လာခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခတစ်ယောက်က ပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံတဲ့ စာတမ်းတစ်ခု ကို ပြုစုပါတယ်။ အဲဒီစာတမ်းမှာ ကြောင်ဟာ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပိုကောင်းစေပြီး လူရဲ့ မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို စွန့်ထုတ်ပေးဖို့ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ရာစုနှစ်တစ်ခုလောက်အထိ အဲဒီဒေသမှာ ကြောင်ဟာ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာတဲ့နေရာမှာ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အဖြစ် ယူဆထား ကြပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ ကြောင်မွှေးတွေနဲ့ မတည့်ပဲ ယားယံတတ်တဲ့ ဇင်မာစတာတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ််။ သူဟာ သူ့တပည့်တွေနဲ့ နေ့စဉ်တရားကျင့်ရာမှာ ကြောင်ကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံးက ဝိုင်းကန့်ကွက်ကြပေမယ့် မာစတာကြီးက အလျှော့မပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဒ်လို အသင်အပြကောင်းတဲ့ ဆရာတစ်ပါး ဖြစ်တဲ့အတွက် တပည့်တွေဟာ ကြောင်မရှိပေမယ့်လည်း တိုးတက်မှုတွေရလာပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ပဲ အမြဲတမ်း အကြံအစည်အသစ်တွေကို ရှာဖွေနေပြီး ကြောင်တွေ အများကြီးကို ကွေျးမွေးရတာ သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သင်တန်းတွေ ကနေ ကြောင်တွေကို ဖယ်ထုတ် လာကြပါတယ်။ နောင် နှစ်၂၀ ကြာတဲ့အခါမှာတော့ အတွေးအခေါ်အသစ်နဲ့ စာတမ်းအသစ်တွေကို ရေးသားပြုစု လာကြပါတယ်။ “ကြောင်မပါရှိပဲ တရားထိုင်ခြင်း၏ အရေးပါပုံ” ၊ “ဇင်စကြာဝဠာကို တိရိစ္ဆာန်၏ အကူအညီမပါပဲ စိတ်၏ စွမ်းအားသက်သက်ဖြင့် ဘက်မျှမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း” စသည်ဖြင့် ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကို ပေးကြပါတယ်။
နောက်ထပ် ရာစုနှစ်တစ်ခု ကုန်လွန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ အဲဒီဒေသက ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ တရားထိုင်တဲ့ ထုံးစံမှာ ကြောင်တွေဟာ လုံးဝ ကွယ်ပျောက်သွား ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက် စုစုပေါင်း နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ လောက် ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို ဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန် တွေတုန်းက ဘယ်သူကမှ ကြောင်ဟာ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီနေရာမှာ ရှိနေသလဲ ဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်ဖို့ မတွေးခဲ့ကြလို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေအားလုံး အခုလက်ရှိနေထိုင်နေကြတဲ့ ဘဝထဲမှာ ဘာဖြစ်လို့ ငါဒါတွေကို လုပ်နေကြရသလဲလို့ မေးရဲတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိပါသလဲ။ သူတို့လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ကို အားလုံးကို ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေဖို့အတွက် ကြောင်တွေဟာ လိုအပ်တယ်လို့ သင်ကြားထား တဲ့အတွက် ကြောင်တွေကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ သတ္တိမရှိပဲ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေမှာလည်း အသုံးမဝင်တဲ့ ကြောင်လိုအရာ တွေကို ဘယ်လောက်အထိတောင်မှ သုံးနေကြဦး မှာပါလဲ။
ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ အခြားနည်းလမ်းနဲ့ ပြုမူဆက်ဆံဖို့ မရှာဖွေကြရတာပါလဲ။
(Paulo Coelho ၏ Like the flowing River: Thoughts and Reflection မှ The Importance of Cat In Meditation ကို ပြန်ဆိုထားပါသည်။)
Posted by ZT at 1:47 AM
Labels: ပုံပြင်, ဘာသာပြန်, အက်ဆေး
အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျ။ လူတွေက ကိုယ့် အတွေး ကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ သဘောနဲ့ တူတယ်နော်။ ပြီးတော့ လက်ခံပြီးသားကို ပြောင်းလဲ ဖို့ ကြောက်တာလဲပါမယ်နဲ့ တူတယ်။
သေချာဖတ်ပြီး စဉ်းစားမိပါသည်။ မိုးတိမ်ညိုပြောသလိုပဲ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဓလေ့ထုံးတမ်းလိုမျိုး၊ အများညီ နေတာမျိုး ကိုစတင်ပြောင်းလဲရဲသော သတ္တိ မရှိပါ။
Is Paulo Coelho your favourite writer? Personally speaking, I do like his style of writing. His stories always give us for keep thinking after reading. Do envy since you can share the taste of his art.
တောင်တွေကို ဘယ်လို တက်ကြမလဲ
Blue Mountains က ကျောက်တုံး ၃ တုံး